iSpyoo သူလျှို App ကိုအင်္ဂါရပ်များ
iSpyoo offersawhole arsenal of powerful monitoring features. တိတ်တဆိတ်ဖုန်းကိုပတ်ဝန်းကျင်အားစောင့်ကြည့်ရန်, စာသားမက်ဆေ့, GPS တည်နေရာ, အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမခေါ်, ဓာတ်ပုံများ, လူမှုမီဒီယာလှုပ်ရှားမှု and more. This page will take you throughalist of our innovative features and this is where you can learn all about how each feature can work for you. Scroll through the page to learn more about all that iSpyoo ပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်. သင်တဦးတည်းကြီးမြတ် package ကိုအပေါင်းတို့၌ဤကြီးစွာသော features တွေခံစားနိုငျ.
အခြားအသေးစိတျအကွညျ့ရှု, လိပ်စာများနှင့်တူ, အီးမေးလ်များ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရာထူး, စသည်တို့ကို.
မိဘတစ်ဦးအဖြစ်သင့်ကလေးသူမ၏မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပြီးသောသူသည်နှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိ. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်သင်ကလေးသူငယ်ကိုဆက်သွယ်ချင်ပါဘူးနောက်ထပ်ကလေးအကြောင်းသိကြ. သို့မဟုတ်သူမသည်သင်တစ်ဦးလူစိမ်းသူသည်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်စုံတစ်ဦးမျှမရှိဖြစ်နိုင်ပါတယ်. You need to know who your child is contacting in order to protect them. iSpyoo records all contacts that are saved on the mobile phone.
ပစ်မှတ်ဖုန်းရဲ့စာအုပ် entries တွေကိုဖြတ်သန်းသွား.
All phonebook entries are uploaded to your online iSpyoo သင်တစ်ဦးအင်တာနက်လိုင်းနှင့်အတူဘယ်နေရာမှာမဆိုထဲကနေ access နိုငျသော control panel ကို
ထိုကဲ့သို့သောလိပ်စာများအဖြစ်သိမ်းဆည်းခဲ့ကြသောအခြားအဆက်အသွယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုပါ, အီးမေးလ်က ID နှင့်မွေးနေ့.
iSpyoo allows you to look at all the phone book entries of the target phone. အတူ iSpyoo, သင်လုပ်နိုင်သည်
ဖုန်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှည့်လည်ခြင်းမရှိဘဲရဲ့ Task အထဲအတွင်းလူအပေါင်းတို့သည် entries တွေကို View.
ခပ်သိမ်းသော entry ကိုများအတွက်သတင်းအချက်အလက်ကိုအသေးစိတျကို access, ဦးစားပေးမှုအပါအဝင်, နောက်ဆုံးရက်, မည်သည့်ငွေစက္ကူကဆက်ပြောသည်.
လူအပေါင်းတို့သည်ရဲ့ Task အထဲသတင်းအချက်အလက်ကိုသင့်ရဲ့အွန်လိုင်းပေါ်ကို upload ပြုလုပ် iSpyoo သင်သည်မည်သည့်အချိန်မှာ logging အားဖြင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်ကြောင်း control panel ကို, ဘယ်နေရာမှာမဆိုအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နှင့်အတူထံမှ.
iSpyoo lets you access all the entries in Task Log made on the target’s Smart Phone. အတူ iSpyoo spy app for smart phones task log, သင်လုပ်နိုင်သည်
iSpyoo lets you Spy Viber, သူလျှိုက Facebook Messenger ကို, သူလျှို iMessage, သူလျှို Skype ကို, Spy WhatsApp that are sent and received through the target phone. အတူ iSpyoo သင်လုပ်နိုင်သည်:
ကြည့်ရန်အုပ်စုကို-messaging ကို session ကိုသစ်လုံး.
ဆိုအင်တာနက်ကို-enabled ကို PC ကနေဒီ data တွေကို access.
ချက်တင်စာတိုပေးပို့ခြင်း Read သည်အခြား Facebook အသုံးပြုသူများနှင့်အတူဖလှယ်
သင့်ရဲ့ Control Panel ထဲကနေဒီသတင်းအချက်အလက်ကို access.
အားလုံး iMessage စကားပြောဆိုချက်တွေကို View.
ထို iMessage စကားပြောဆိုချက်ရှိလူများ၏ထားတဲ့ IM အမည်များနှင့်နံပါတ်များမှာကြည့်ပါ.
အသီးအသီးကို chat ရာအရပျကိုယူသည့်အခါအချိန်နှင့်ရက်စွဲကိုတံဆိပ်ခေါင်းများကိုသိရန် Get.
မည်သည့်ဓာတ်ပုံများလက်လှမ်း Get, ဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်အသံဖိုင်တွေကို iMessage မှတဆင့်စေလွှတ်ပစ်မှတ်ဖုန်းပေါ်မှာသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်.
လူအပေါင်းတို့သည် iMessage သတင်းအချက်အလက် tracking သင်၏အွန်လိုင်းဖို့ upload ပြုလုပ် iSpyoo control panel which you can be accessed from anywhere with an internet connection, မည်သည့်အချိန်တွင်မ.
အားလုံး Skype ကိုချက်တင်စကားပြောဆိုချက်တွေကို View.
ပြီးပြည့်စုံသော Skype ကိုခေါ်ဆိုခသစ်လုံး View.
သူတို့နှင့်အတူ chatting နှင့်တောင်းဆိုထားပြီကြောင့်လူများ၏အမည်များနှင့်နံပါတ်များကိုထုတ် Find.
အသီးအသီးကို chat သို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုခရာအရပျကိုယူသည့်အခါအချိန်နှင့်ရက်စွဲကိုတံဆိပ်ခေါင်းများကိုသိရန် Get.
မည်သည့်ဓာတ်ပုံများလက်လှမ်း Get, ဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်အသံဖိုင်တွေကို Skype ကိုမှတဆင့်စေလွှတ်ပစ်မှတ်ဖုန်းပေါ်မှာသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်.
အားလုံးသည် Skype ကိုချက်တင်စကားပြောဆိုချက်တွေကိုနှင့်ခေါ်ဆိုခသစ်လုံးသင်၏အွန်လိုင်းဖို့ upload တင်ထားပါသည် iSpyoo သင်တစ်ဦးအင်တာနက်လိုင်းနှင့်အတူဘယ်နေရာမှာမဆိုထဲကနေ access နိုငျသော control panel ကို.
အားလုံး WhatsApp ကိုဆိုင်ချက်တင်ကိုခြေရာခံ.
သင့်ရဲ့ Control Panel ထဲကနေတိုက်ရိုက်သတင်းအချက်အလက်များ access.
သွားရောက်ကြည့်ရှုကြောင်းသိရသည်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ URL ကိုကြည့်ပါ.
ပစ်မှတ် user ကိုသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့်ကြည့်ရှုပါ.
အားလုံးသည်သွားရောက်ခဲ့ပြီး website ကို URL များကိုသင်၏အွန်လိုင်းဖို့ upload တင်ထားပါသည် iSpyoo သင်တစ်ဦးအင်တာနက်လိုင်းနှင့်အတူဘယ်နေရာမှာမဆိုထဲကနေ access နိုငျသော control panel ကို.
အသီးအသီး website မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်အခါသင်သိနိုငျဒီတော့အချိန်နှင့်ရက်စွဲကိုတံဆိပ်ခေါင်းများ Get.
ပစ်မှတ် user ကိုတစ်ခုချင်းစီ website ကိုသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးအကြိမ်အရေအတွက်ကိုအထဲက Find.
websites များကို bookmark လုပ်ထားတဲ့ခဲ့ပြီးသောကြည့်ရှုပါ.
အသီးအသီးအကြိုက်ဆုံး Website ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ, ကြည့်ရှုပါ.
သင့်ရဲ့ Control Panel ထဲကနေတိုက်ရိုက်ဤအချက်အလက် Analyze.
သင့်ရဲ့န်ထမ်းအီးမေးလ်များကိုပေးပို့ဖို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဆဲလ်ဖုန်းသုံးပါ. သူတို့ကိုလည်းဆဲလ်ဖုန်းနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအီးမေးလ်များကိုပေးပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းနေကြတယ်? အဘယျသို့ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလျှို့ဝှက်ချက်များကိုပေးပို့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်.? သင်လိုအပ် iSpyoo to keep tabs on your employees’ မိုဘိုင်းဖုန်းရဲ့အီးမေးလ်လှုပ်ရှားမှု. သင့်ကလေးအတွက်လူမှုမီဒီယာကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဟာမှာအကောင့်အသစ်များ၏ကို set up ဆဲလ်ဖုန်းရဲ့အီးမေးလ် app ကိုသုံးနိုငျသ. ဒီတစ်ခါလည်းသင့်ကလေးသင်တို့အကြောင်းမသိရအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ဖို့ချင်ပါဘူး. iSpyoo will help you learn the truth about what emails they are sending and receiving.
iSpyoo lets you view all emails that are sent or received through the target phone. အတူ iSpyoo သင်လုပ်နိုင်သည်:
အားလုံးသည်အီးမေးလ်များကိုသင့်ရဲ့အွန်လိုင်းဖို့ upload တင်ထားပါသည် iSpyoo သင်တစ်ဦးအင်တာနက်လိုင်းနှင့်အတူဘယ်နေရာမှာမဆိုထဲကနေ access နိုငျသော control panel ကို.
လူကြိုက်များအီးမေးလျမှတဆငျ့ applications တွေကိုဖလှယ်အီးမေးလ်များမှာကြည့်ပါ.
အချိန်ကိုမှတ်တမ်းတင်ကို set up.
ထို bugging Manage နှင့်သင့် Control Panel ကိုတဆင့်အသံဖမ်း access.
သင့်ကလေး၏လှုပ်ရှားမှုများအဖြစ် ပို. ပင် In-depth ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာရနိုင်ဖို့အတွက်, ဖုန်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၏လျှို့ဝှက်ချက်အသံဖိုင်ကလစ်တိုက်ရိုက် Control Panel ထဲကထံမှမှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်. သင် command ကိုပို့ခင်သင်အသံဖိုင်ညှပ်ဖြစ်ချင်သောမိနစ်အရေအတွက်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်. သငျသညျအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအခါတိုင်းသင်ကစားရန်အဘို့အထိုအခါအသံသွင်းလျှင်မြန်စွာ panel ကိုမှ upload တင်ထားပါသည်. သူတို့ကိုပယ်နေစဉ်သင့်ကလေး၏ပတ်ဝန်းကျင်နားထောင်ခြင်းသင်ဘေးကင်းလုံခြုံသူတို့ကိုစောင့်ကူညီပေးပါမည်. သူလက်မှရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်လျှင်သင်နားထောင်မည်, နှင့်လိုအပ်တဲ့အခါအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန်သက်သေအထောက်အထားများ.
ပစ်မှတ်ဖုန်းဟာရိုးရိုး SMS ကို command ကို Send သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းမှကိုအသုံးပြုဖို့ iSpyoo remote control to activate the Live Call Intercept feature.
မှတ်ပုံတင်ရန်အတည်ပြုပြီးနောက်, သင်ဘယ်ဖုန်းမဆို အသုံးပြု. ဖုန်းခေါ်ဆိုရန်အတွက်နားထောင်နိုင်သည်. သင်ရုံပစ်မှတ်ဖုန်းရဲ့အရေအတွက်ဖုန်းခေါ် dial ရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်သင်ချိတ်ဆက်ထားလိမ့်မယ်.
သငျသညျမှသို့မဟုတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတဲ့ကြိုတင်သတ်မှတ်ထား number ကိုကို set up.
အဆိုပါမှတ်တမ်းတင်ခြင်းတစ်ခုခုကိုကိုတိုက်ရိုက်သင်တို့ထံမှ Control Panel ထဲကမှ Listen သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ PC မှသူတို့ကို download လုပ်.
အချိန်ဘယ်လောက်သင့်ရဲ့ကလေးသို့မဟုတ်ဝန်ထမ်းသင့်မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖြုန်းပါဘူး? အဘယ်သူသည်သူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့သောအခါနေကြတယ်? အတူ iSpyoo Smartphone Monitoring Software you can monitor their phone call information. သူတို့မခေါ်သူကိုထွက်ရှာ, သူတို့မခေါ်ကြသောအခါ, သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီခေါ်ဆိုခအပေါ်ဖြုန်းမည်မျှအချိန်.
သူလျှို SMS စာတို
ရိုးရှင်းစွာအသင်၏အထဲသို့ SMS တခုသတင်းစကားထဲမှာရိုက်ထည့် iSpyoo control panel and send an SMS to any number through the target phone.
စာလက်ခံသူက SMS ကိုပစ်မှတ်ဖုန်းမှလက်ခံရရှိထားပြီးကြောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် SMS ကို message ကိုပစ်မှတ်ဖုန်းကိုဖြတ်သန်းသွားပါလိမ့်မယ်.
စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကို၏ပေးပို့သူ / လက်ခံသူ
သင့်ရဲ့ Control Panel ထဲကနေတိုက်ရိုက်ဤအချက်အလက် access.
သင့်ကုမ္ပဏီလယ်ပြင်၌သင်တို့၏န်ထမ်းမှမိုဘိုင်းဖုန်းများကိုထောက်ပံ့ပေးဆိုပါစို့. သူတို့ကတာဝန်ပေးအပ်နေရာများမှခရီးသွားလာနေလျှင်သင်မည်သို့သိလား? သို့မဟုတ်သင့်ကလေးအတည်ပြုသောသူတို့သည်မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့အိမ်ကိုအလည်အပတ်လာရောက်ကြသည်သင်တို့ကိုပြောပြပေမယ့်အစားသင်မသွားဖို့သူတို့ကိုပြောခဲ့ပါတယ်တစ်နေရာရာမှာဝင်မြင်ယောင်ကြည့်. အတူ iSpyoo Smartphone Monitoring Software you will know exactly where your employees or children are when they are away.
GPS စနစ် postions သင်တစ်ဦးမြေပုံ link တစ်ခုနှင့်အတူကို select တဲ့အချိန်ကြားကာလမှာ upload တင်ထားပါသည်.
ဆယ်ကျော်သက်အေးမြနဲ့သူတို့ရဲ့ရွယ်တူကလက်ခံဖြစ်ချင်တယ်နှင့်မြင့်မားသောယနေ့၏ဖက်ရှင်နှင့်အလှအပစက်မှုလုပ်ငန်းကလွှမ်းမိုးထားပါသည်. ဒါဟာသူတို့ဝတ်စားဆင်ယင်လမ်းလုပ်ရပ်မှကြွလာသောအခါထိုသူတို့စာအိတ်တွန်းအားပေးရန်ယခင်ကထက်ပိုပြီးဖိအားပေးနေကြပါတယ်ပုံရတယ်. စမတ်ဖုန်းများယခုအလျှော့ဓာတ်ပုံများနှင့် ယူ. Facebook ကဲ့သို့သောဆိုက်များမှသူတို့ကို post သူတို့ကိုအခွင့်အလမ်းကိုပေး, Twitter နှင့် MySpace က. သူတို့ဟာသူတို့ပဲပျော်စရာရှိခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိကလမ်းအတွက်တစ်စုံတစ်ဦး impressing နေကြတယ်ထင်, ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့ဓာတ်ပုံတွေသူတို့တဘက်၌သုံးနိုင်တယ်နှင့် creepy ကလူအများကြီး posted ဓါတ်ပုံများ၏ဤအမျိုးအစားသည်ကိုကြည့်ထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်. ကိုအသုံးပြုခြင်း iSpyoo to learn the truth about what photos and videos are being taken with your child’s cell phone.
ဆလိုက်ရှိုးအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်မှတဆင့် Thumbnails အဖြစ်ဓါတ်ပုံများကိုကြည့်ရှု iSpyoo control panel.
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုမှဓာတ်ပုံများကို Download လုပ်.
ဓါတ်ပုံသင်၏အွန်လိုင်းဖို့ upload တင်ထားပါသည် iSpyoo သင်တစ်ဦးအင်တာနက်လိုင်းနှင့်အတူဘယ်နေရာမှာမဆိုထဲကနေ access နိုငျသော control panel ကို.
ပစ်မှတ် device ကိုမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ရှိသမျှကိုဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ရှု.
ဖြောင့်သင့်ရဲ့ Control Panel ထဲကထံမှသတင်းအချက်အလက်များ access.